हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड मर्जरको तयारीमाः नेपालकै ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने ? - Aathikbazarnews.com हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड मर्जरको तयारीमाः नेपालकै ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने ? -
creative writing discord servers health and social coursework help development of creative writing skills help to writeawedding speech do your homework cat meme online masters of fine arts creative writing creative writing in english in germany creative writing jobs sheffield role of literature review in proposal writing pay for homework websites primary homework help inventions rich tudors primary homework help order cheap essay online ma creative writing oxford north carolina creative writing mfa creative writing bbc bitesize gcse just do your homework meaning primary homework help mountain ranges writeashort note on creative writing online masters programs in creative writing video on creative writing jobs where i can do my homework resume writing service online snow scene creative writing creative writing spoken poetry what jobs can you get withacreative writing major using contractions in creative writing modernism creative writing the best research paper writing service master's thesis writing services
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड मर्जरको तयारीमाः नेपालकै ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने ?
नेपालका ठूला दुई वटा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेड बीच निकट भविष्यमा मर्जर भए अचम्म मान्नु पर्दैन । जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक मिलेर बनेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड आजका मितिमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक र बलियो बैंक बनेको बेला ठूला एउटै पारिवारिक नाता भित्रैका प्रमोटर शेयरधनी भएका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जरको चर्चा चुलिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग खुलेरै भनेः– कुरा भएको छ । दुबै पक्ष बीच एउटा बैंक बनाउने कुरामा हामी सहमत भएकै हो । तर, पद कसरी मिलाउने भन्ने बारे र शेयर रेसियो के गर्ने भन्ने बारे अन्तिम
छलफल जारी छ । उनीले प्रस्टै भनेः– विवाहको लगन जुरेपछि मात्रै अरु कुरा गरौला । कुरा चलेको छ । मिति टुंगो भएको छैन । दुबै पक्ष मिल्ने कुरामा एकमत छन् । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने अब १÷२ महिनामा पछि नेपालकै पूराना नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जर हुने पक्क पक्की जस्तै देखिन्छ ।
यता नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडका एक सञ्चालकले पनि नाम नलेख्ने शर्तमा भने मर्जरको कुरा चलेको छ । केही दिन देखि छलफल र कुराकानी भएका छन् । खासगरि हाम्रा अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर गर्न चासो देखाउनु भएका कारण हामी बीच मर्जर हुने कुरा पक्का पक्की जस्तै छ नि ।
भनिन्छ, दुवै बैंकका मर्जर कमिटी बीच नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडले मर्जरमा जाने सन्देश दिने खालको लाभाशं मिल्दो जुल्दो हुने गरि १५ देखि २० प्रतिशत गर्ने भिनी सहमति समेत भएको ती सञ्चालकको दाबी छ ।
दुवै बैंक स्थापित पुराना र राम्रा बैंक भएका कारण स्वाप रेसियो पनि १ शेयर बराबर १ शेयर नै हुने सहमती समेत भएको स्रोतको दाबी छ ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता बीचको पारिवारिक सम्बन्ध यी बैंक एक आपसमा गाभिने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ र, मर्जरमा जाँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको पहिलो रोजाई हिमालयन बैंक हो भने हिमालयन बैंकको पहिलो रोजाइ पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका सीइओ युवा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डे छन् । हिमालयन बैंकका सीइओ राष्ट्र बैंकका पहिलो गर्भनर हिमालयन शम्सेर जवराका छोरा अशोक राणा छन् । बंैक अध्यक्षमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा पृथ्वी बहादुर पाण्डे छन् भने हिमालयन बैंकमा तुलसीराम गौतम छन् । गौतम सञ्चयकोषका प्रमुख हुन् ।
ती सञ्चालकले पंक्तिकारसंग प्रस्टै भने अध्यक्ष को बन्ने भने बारे विवाद छैन । सीइओको बारे चहि कसरी मिलाउने भन्ने बारे कठिन छ । यी दुई बैंक मर्जर भए अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे हुने र सीइओ अशोक सम्शेर राणा हुने हुँदा युवा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डे माथी अन्याय हुने भएकाले यसबारेमा पनि छलफल जारी छ नि ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जरमा गएर एनआइसी एशिया र ग्लोबल आइएमई बैंक भन्दा बलियो, सक्षम र सबल बैंक बन्ने निश्चित देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम गौतमको बैंकमा व्यक्तिगतरुपमा सेयर छैन । उनी कर्मचारी सञ्चयकोषका जागिरे हुन् । उनी संस्थागत प्रतिनिधित्व गरेर बैंकको अध्यक्ष बनेका हुन् । गौतम व्यापारी नभएकाले भोलिको ठूलो नाफाघाटा र आफ्नो पद के होला भनेर हेर्दैन् । बरु आफू अध्यक्ष भएको बेला सरकारी नीतिअनुरुप बिग मर्जर गराएको जस लिने पक्षमा उनी छन् भन्दा फरक पर्दैन, गर्भनर साब ।
हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानी हबिब बैंकको लगानी रहेको छ भने हबिबले लगानी फिर्ता लैजाने आशय प्रकट गरिसकेको देखिन्छ । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर भए विनोद चौधरीको चर्को लगानी रहेको आफूलाई ठूलो भन्दै आएको नबिल बैंकलाई झड्का लाग्ने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन । सबैभन्दा बढी दबाब नविल बैंकलाई पर्ने छ । किनभने एक नम्बरको ताज खोसिएपछि यस बैंकलाई पनि आक्रमकरुपमा अगाडि बढ्न र विशेषगरी राष्ट्रबैंकको
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र हिमालयन बैंकक अध्यक्ष तुलसीराम गौतमबीच धेरै पटक मर्जरको बारेमा छलफल भएको खुलेको छ । यदि मर्जर भए हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्नेछ । यसमा दुईमत छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १४ अर्ब २४ करोड ८९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको रिजर्बमा रिजर्बमा १२ अर्ब १ करोड ५४ लाख २१ हजार छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग १ खर्ब ८४ अर्ब ७३ करोड ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ निक्षेप छ । कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड २४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
हिमालयन बैंकसँग ९ अर्ब ३७ करोड २२ लाख ८१ ह्जार ४२८ रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । रिजर्बमा ६ अर्ब ८ करोड ७ लाख ६ हजार ७५९ रहेको छ । यस्तै निक्षेप १ खर्ब २८ अर्ब र कर्जा ९९ अर्ब ३८ करोड रहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
यदि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड मर्जर भए बैंकको चुक्ता पूँजी करिब २५ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । यस्तै रिजर्बमा १८ अर्ब ९० करोड रहेको छ । निक्षेप ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । जुन २७ वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी हुनेछ । यस्तै कर्जा २ खर्ब ३४ अर्ब पुग्ने निश्चित छ ।
बैंकसंख्या घटाउने उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढ्न दबाब बढ्ने छ भन्दा फरक पर्दैन । यी दुई ठुला र मजबुद बैंक मर्जर भए नेपालको इतिहासमै ठूलो र उच्च खानदानी बैंक बन्ने देखिन्छ । सचेत भया ।
एनएमबि बैंकको कार्डमार्फत सिजीका सामान किन्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट पाइने
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा ८४ करोड ४४ लाख
सानिमा बैंकमा पाँच दिन विषेश छुट अफर
चीनको अनुदानमाः लुटको खेती !